LABADA MADAXWAYNE EE UGU GUULAHA BADAN: Silvio Berlusconi oo dhanka guulaha barbarreeyay madaxwaynihii Real Madrid ee Santiago Bernabeu – Gool FM
(Milano) 01 Jan 2016 – Mar uu waraysi siinayay warsidaha Libero, ayuu Silvio Berlusconi ka sheekeeyay xaaladda kooxda AC Milan, gaar ahaan wada xaajoodyada ay kula jiraan dallada Chinese-ka ah iyo guushii ugu dambeeysay ee Italian Super Cup.
Ninka 1-aad ee Rossoneri ayaa sheegay inaysan sahlanayn iibinta boombalihiisa, balse ay jiraan dhowr sababood oo ku xambaaray go’aankaas: “Wada xaajoodyada Chinese horraanba waa kuwo guulaystey, waxay kaliya na waydiisteen waqti dheeri ah sababo farsamo dartood, waana ka yeelnay inaan u dheerayno waqtiga ay lacagta bixinayaan.” ayuu yiri wasiirkii 1-aad ee hore.
Habka uu uga tegayo AC Milan waa habka ugu wanaagsan, waana guusha Super Cup oo uu ka qaaday Juventus, Berlusconi ayaana sidaa ku qaaday koobkiisii 29-aad, isagoo bareejeeyay Santiago Bernabeu, oo ahaa madaxwaynihii hore ee Real Madrid.
“Si kastaba, AC Milan waxay qaadday koob kale waana Italian Super Cup, waxaana ku biiray Santiago Bernabeu, oo ah madaxwaynihii halyeeyga ahaa ee Real Madrid. Waxaan hadda nahay labada madaxwayne kooxeed ee ku guulaystey koobabka ugu fara badan dunida kubadda cagta. Waxayna iila muuqataa inaanan caban karin. ” ayuu daba dhigay Berlusconi.